Họtelu ndi di na Jos, Plateau - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Jos, popularly referred to as “J-town”, is a city in the middle-belt part ...
Obodo -J na-ewu ewu ama-ama bụ isi obodo nke Plateau Steeti, na kwa obodo di ukwu na mpaghara obodo ógbè etiti bu nke a na akpo (Middle Belt) na okwu beeke na Nigeria. Obodo-J bu nke amara dị ka "ulo nke udo na nke njem nleta" maka ihe osise nke nka nke ahu ulo ya di ịtụnanya, Omenala di iche iche, bụrụ kwa ebe obibi ndị oge ochie nke omenala Nok.
Jos bụ otu n'ime ebe di itunaya I ga njem nleta na Nigeria bu nke ji ihe otụtụ otu pụkụ na nari ato (1300) di na ebe di elu kari a ogugu nke oké osimiri, nke na-eme oji buru mpaghara akụkụ kacha aju oyi nke mba Nigeria mgbe nile .
Ogige Njem Nleta di Na Jos
Ugwu nke Shere Hills (1800m) amama gbara ya gburugburu. Na kwa ugwu Jarawa, na ugwu Vom na nke Gana Wuri. Jos bụ ebe ndi njem nleta na ahọrọkari maka iji ukwu eme nkpaghari. Ihe okike mara mma, iyi na odo mmiri nta ndi dị iche iche gbara ya gburugburu, n'ógbè ebe ezumike zuruoke maka ezumike nke ezinụlọ.
Di ka ebe amara na oge mbu di ka ulo nke udo na nke njem nleta, e nwere ọtụtụ ihe di na Jos bun di aga ahụ, ihe ndi dị ka; Ogige nke ihe ngwa agha ochie nke goovomenti etiti nke Jos, Ogige ochie osise ihe omenala nke Nigeria, ogige ebe Ngwuputa gbamgbam na ogige ebe a na azu umuanu ohia.
Họtelu Ndi di na Jos
E nwere ọtụtụ họtelu, ufodụ nime ha bu ndi na enye obi ume ala. Họtelu ndi di elu na Jos agụnyere Crest Họtelu and Suites, Hill Station Họtelu na Conference nke di na ogige di ocha na ebe ihe okike nke uwa maka gị I nweta ntụrụndụ zuru oke mgbe I nwetachara ihe obi uto zuru oke, họtelu ndị a na enye nlekota nke onye ọbịa zuru oke na ọnụego ahia di ala.
Họtelu Rayfield Họtelu Tudun Wada Họtelu Bukuru Họtelu Polo Họtelu Rantya Họtelu Zaramaganda
Họtelu Dadin Kowa Họtelu Anglo Họtelu Vom Họtelu Mangu Họtelu Pankshin Họtelu Langtang